Ifulethi lesimanje futhi elithokomele le-boutique enkabeni yeTuzla - I-Airbnb
Ifulethi lesimanje futhi elithokomele le-boutique enkabeni yeTuzla
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Senad
U-Senad Ungumbungazi ovelele
Ifulethi lesimanjemanje, elithokomele le-boutique elihlala abantu abangafika kwabathathu endaweni ekhangayo emaphakathi neTuzla, elinazo zonke izinsiza nezidingo zokuhlala okuhle nokuzijabulisa. Abasingathi abanobungane (isiNgisi/ezinye izilimi ezikhulumayo) abazimisele ukukwazisa ngedolobha nendawo elikuyo, kuye ngezintshisekelo Zakho.
Ifulethi le-MS linomoya opholile futhi indawo yangasese eshisayo etholakala esitezi sesine ebhilidini elinendawo yokungena ehlukile/yangasese. Inekamelo lokulala elilodwa (umbhede owodwa) nendawo evamile/igumbi lokuhlala elinosofa ogoqekayo/umbhede okabili, ikhishi elihlome ngokuphelele kanye negumbi lokugezela. Kukhona nenethiwekhi ye-WI-FI/cable kanye ne-Cable TV.
Isuphamakethe isezingeni eliphansi lesakhiwo, Izindawo zokudlela ngaphesheya kwebhilidi, Imakethe yedolobha ngaphesheya - nje kwelinye icala... Indawo yokupaka yamahhala nepaki namabhange/Ama-ATM khona kanye ngemva kwesakhiwo, imizuzu engu-5-10 uhamba ngezinyawo ukusuka isitolo sotshwala sedolobha elidala (ubhiya omnandi nokudla) & nengxenye emaphakathi yedolobha (idolobha elidala) elinezitolo eziningi zekhofi, izindawo zokudlela, izindawo zokudlela, izitolo zezikhumbuzo nokunye okukhangayo okuyinhloko... imizuzu eyi-10-15 uhamba ngezinyawo usuka e-pannonian lakes complex. Umtholampilo waseTuzla Gradina utholakala endaweni engamamitha angama-200 phezulu nje kwegquma ukusuka ebhilidini.
Ihlala ikhona/itholakala kunoma yimiphi imibuzo ekugcineni izivakashi zethu ezithandekayo ezingaba nayo. Ngingakubonisa eduze futhi singahlala sihlangana futhi sihlanganyele ingxoxo emnandi futhi sixoxe ngebandayo... :-)
USenad Ungumbungazi ovelele
Izilimi: English, Русский, Svenska